tshintsha injini yokhangelo esisiseko kwi-microsoft edge
I-Microsoft icebisa i-Bing ngamava okhangelo andisiweyo kwi-Microsoft Edge kwi-Windows 10. Ukugcina i-Bing njengenjini yokhangelo esisiseko yakho kukunika:
Iilinki ezithe ngqo kusetyenziso lwe-Windows 10, nto leyo ekusa ngqo kusetyenziso lwakho ngokukhawuleza.
Iingcebiso ezinxulumeneyo ezingakumbi ezisuka kwi-Cortana, umncedisi wedijithali wakho wobuqu.
Continue reading “tshintsha injini yokhangelo esisiseko kwi-microsoft edge”
Author SupportPosted on 25/01/2016 25/01/2016 Categories Windows 10Tags Microsoft Edge, Windows 10Leave a comment on tshintsha injini yokhangelo esisiseko kwi-microsoft edge
yongeza umdlalo kuluhlu lwakho lwemidlalo kusetyenziso lwe-xbox
Yiya kwi Qalisa > I-Xbox > Imidlalo yam uze ukhethe isimboli yokongeza.
Continue reading “yongeza umdlalo kuluhlu lwakho lwemidlalo kusetyenziso lwe-xbox”
Author SupportPosted on 24/01/2016 24/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, XboxLeave a comment on yongeza umdlalo kuluhlu lwakho lwemidlalo kusetyenziso lwe-xbox
lungisa iingxaki zokusayina ungene kusetyenziso lwe-xbox
Ukuba unengxaki nokusayina ungene kusetyenziso lwe-Xbox, nazi izinto ezimbalwa ongazizama.
Qinisekisa uqhagamshale kwi-intanethi.
Yiya ku Xbox.com uze usayine ungene khona ukuqinisekisa inkonzo ye-Xbox iyasebenza yaye akunangxaki nenakhawunti yakho.
Continue reading “lungisa iingxaki zokusayina ungene kusetyenziso lwe-xbox”
Author SupportPosted on 24/01/2016 24/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, XboxLeave a comment on lungisa iingxaki zokusayina ungene kusetyenziso lwe-xbox